Iindawo ezilungileyo zokuntywila eMorocco | Ukuhamba kwe-Absolut
Iindawo ezilungileyo zokuntywila eMorocco
EMntla Afrika kunjalo MoroccoIlizwe elihle nelamandulo elinonxweme kuLwandlekazi lweAtlantic nakuLwandle lweMeditera. I-Strait yeGibraltar edumileyo iyayahlula eYurophu kwaye ngenxa yendawo ekufutshane nayo kunye nendalo yayo nenkcubeko ifumana ukhenketho oluninzi.
Kodwa ubuyazi lonto eMorocco kukho iindawo zokuntywila? Ewe kunjalo, ukongeza kwiiNdawo zeLifa leMveli leHlabathi, imibhiyozo yayo kunye ne-gastronomy yayo, iMorocco ngomona ikhusela ezinye iindawo zokuntywila kunye ne-snorkel. Namhlanje siza kudibana nabo.
2 Ukuntywila eMorocco
3 Ukuntywila phi eMorocco
Njengoko besitshilo, eli lizwe linjalo emantla afrika, lilizwe elizimeleyo elinembali ende yobukoloniyali edityaniswe neSpain neFrance. La mazwe ahlala abantu ukusukela ngamaxesha angaphambi kokubhalwa kwembali, inkcubeko ezininzi zidlulile apha.
AmaSilamsi afika ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX kwaye kwizandla zawo zazikhazimla njengezixeko ezintle njenge UFez, Marrakech, Rabat kunye neMeknes. Ngokubhekisele kubume bayo, iMorocco ineentaba namathafa kwaye iyonwabela Imozulu yeMeditera kunxweme lwayo nakwilizwekazi elingene ngaphakathi.
Ngokuchanekileyo kunxweme apho iindawo zokuntywila.
Ukuntywila kunye neMorocco akunakuhlala kuhambelana kwisivakalisi esinye. Omnye ucinga ngeli lizwe kwaye ucinga ngeentlango, iinkamela, iikharavani, ii-safaris, abathengisi kunye nabathengisi abaninzi kunye nezo ntlobo zembonakalo yomhlaba. Ke, Ngaba ungatshona ngenene? Ewe.
Bonke ubutyebi bayo benkcubeko bugubungela kancinane ubuhle bamanxweme ayo, kwaye akukho kunqongophala kwabaseYurophu abathi Bacinga ukuba ukuntywila kufanele kungavunyelwa eMorocco, kodwa akunjalo. Akufani nokuba ungatshona naphina, nokuba awunyanzelekanga ukuba uhambe ngokukhululekileyo ngokulindela okuphezulu nokuba.
EMorocco kukho amaziko okuntywila ambalwa kwaye akakufuphi kangako. Ke, ukuba unomdla wokuntywila, kuya kufuneka ufumanise ukuba uza kuqala phi kwaye uye ngqo kwiziko lokuntywila. Ayisiyo yokuba uza kukhubeka kwezi ndawo ngamathuba.
IMorocco ikwindawo efanayo neFlorida, kodwa Amanzi alo abanda kakhuluNangona imisinga ithambile kwaye ngokubanzi ulwandle luyi-placid. Ubala ukuba amaqondo obushushu kumbindi weMorocco, xa ethetha ngamanzi, ajikeleze i-15ºC ebusika kunye nama-25ºC ehlotyeni.
Ngokumalunga nobomi baselwandle enye yeenzuzo zokuntywila eMorocco kukuba zininzi izilwanyana zasendle. Ngapha koko yenye yeendawo ezimbalwa emhlabeni apho kuqubha ngokusemthethweni nehlengethwa elwandle. Ke kukho iiarhente zokuntywila ezidibanisa ukukhwela iphenyane kunye nokubukela ihlengethwa kunye nokudada kancinci kunye. Unokubona Ufudo lwaselwandle kwaye ukuba ukwireferensi kukho tunas, eels, groupers kunye nolwandle bream.
Eyona nto intle ngokuntywila eMorocco yile nto ingekho kwimephu yokuntywila ngokubanzi, ke nabani na oza apha uya kuba nethuba elikhulu lokungabikho phakathi kwabantu abaninzi. Eyona nto intle xa untywila kukufika phambi kwesihlwele ukuze ungoyikisi iintlanzi kwaye apha eMorocco kulula. Nangona kunjalo, ayimangalisi into yokuntywila kunye ne-snorkeling ke ukuba uya kulindela phezulu uyaphoxeka.
Ukuntywila phi eMorocco
Agadir Yindawo elungileyo yokuntywila eMorocco. Sisixeko esilikomkhulu lommandla waseSouss-Massa kwaye sinonxweme loLwandlekazi lweAtlantic. Ziikhilomitha ezingama-600 emazantsi eRabat kunye neekhilomitha ezingama-440 ukusuka eCasablanca.
IAgadir yasekwa ngamaPhuthukezi ngenkulungwane ye-1960 kwaye ngo-XNUMX yehlelwa yinyikima enkulu. Inenkcubeko etyebe kakhulu ukuze ukwazi ukudibanisa yonke into kukhenketho olufanayo. Unokuqesha enye Uhambo lwemizuzu engama-45 lokuntywila.
Amanzi afudumele, nangona ukubonakala kungaqinisekiswanga. Kungcono ukujonga iimeko zemozulu ngaphambi kokuba ubhalise. Ukuntywila e-Agadir kudityaniswe nokukhwela isikhephe kwaye kuhlala kuqala phakathi kwentsasa, malunga ne-9: 30 kusasa, kunye nokulandwa kwehotele.
Uhambo lwemoto luthabatha abantu abakhenketha intaba ukuya elwandle apho isixeko silinda khona kwaye emva kokuhamba isiqingatha seyure, bafika kwindawo ekhethiweyo apho bahlala khona kangangemizuzu engama-45. Ukhenketho lubandakanya iziselo kunye nesidlo sasemini kwaye ukuba ufumana into yerhafu yokuloba. Ubuyela ehotele malunga ne-3 emva kwemini. Ukuqesha ukhenketho, kufuneka kubekho isibini esinye.
Enye indawo yokuntywila eMorocco yiDakhla, emazantsi eli lizwe.
Esi sixeko sikwintshona yeSahara kwaye namhlanje sihlala eMorocco. uphumle kwi usingasiqithi omxinwa kunxweme lweAtlantiki, eRío de Oro Peninsula. La mazwe ahlala ixesha elide yiBerbers, kodwa indawo yokuhlala yakhula isuka kwispanish esasiza njengabalobi abasuka kwiiCanaries ezikufutshane.
Namhlanje uDakhla uphila ngokuloba nakwezokhenketho kwaye ixesha elithile le ndawo injalo ezemidlalo zamanzi iMexico, ukuthandwa kakhulu ukubetha komoya, ikitesurfing kunye nokusefa. Kwaye ukuya kwinqanaba elincinci, i ukuntywila. Nangona kunjalo, kukho abo bacinga ukuba le ndawo yokuphumla ngaselwandle yiparadesi encinci yee-busos kuba i-lagon yayo yamanzi amnandi. Kwi-Dakhla ungenza i-adventures ngaphakathi okanye elwandle ukuze ubone ubuhle bayo bangaphantsi kwamanzi kunye nayo inani elingaqhelekanga leentlanzi.
Essaouira Sisixeko esikwizibuko kwaye sikhenketho kakhulu esikunxweme lweAtlantic. Phumla kwi ibha ivaliweInedolophu endala entle, eneendonga ezijonge elwandle, kwaye intle kakhulu. Inayo yonke into kunye nolwandle lwayo, oluchukunyiswe yimimoya yorhwebo, yindawo entle yezemidlalo enje ikitesurfing, ukubethwa ngumoya kunye nokusefa. Ngokusisiseko iyafana nakuDakhla, kwaye yongeza apha nayo ukudilika emanzini, nangona ayingamanqaku alishumi.
Inyaniso yileyo amanzi amdaka ngandlela ithileKananjalo azihlambulukanga kangangeentsuku ezithile, ke ngelixa zidwelisiwe zininzi izinto ezingathandekiyo. Ukuza kuthi ga ngoku sithethile ngokuntywila eMorocco kumanzi eAtlantic, kodwa uthini ngamanzi aseMeditera? Unxweme lweMeditera alungcono nokuba, azikho ninzi iintlanzi kwaye abanye bathi ngamanye amaxesha kwezinye iindawo kufana nokuntywila kumjelo ohambisa amanzi amdaka. Ngaba kunjalo?
Inyani yile yokuba isixeko sase-Essaouira yindawo entle, enabantu abalunge kakhulu, ukutya okumnandi kunye nobomi obuninzi esixekweni, kodwa kuncinci elunxwemeni. Ngaphandle kwezemidlalo sele zikhankanyiwe, ezingathandekiyo, nokuba kunzima ukuntywila apha kufanelekile. Emaphethelweni onxweme kukho iziqithi ezithile kodwa azizizo iindawo ezifanelekileyo zokwenza i-snorkeling okanye ukuntywila kuba ulwandle lunokuba rhabaxa, ngenxa yemimoya yeAtlantic.
Ngapha koko, hlala ukhumbula ukuba i-Essaouira sisixeko esinomoya kwaye iibhulukhwe ezinde kunye nento efudumeleyo zizinto zokuhlala unazo kwityesi yakho. Kodwa ke, ngokusisiseko imalunga nokuba semanzini hayi phantsi kwawo ...
Okokugqibela, ukuntywila eMorocco kuya kufuneka uyazi loo nto Ixesha lokuntywila unyaka wonke kuba imozulu ilungile ngawo onke amaxesha onyaka. Njengoko besesitshilo ngentla, ngeenyanga zikaJanuwari ukuya kuMatshi kumalunga ne-17ºC naphakathi kukaJulayi noSeptemba, 23ºC. Akukubi ukungena ngaphakathi okanye ngaphandle kwamanzi.
Yazi futhi loo nto akukho arhente zininzi kwaye oko kulungile kuba ababaninzi abantu kwiindawo zokuntywila kwaye uhlala ukhatshwa yingcali. Ayisiyonyani le, amanzi ayangxama kwaye kufanelekile ukuba kunye nomntu oyaziyo into abayenzayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iindawo ezilungileyo zokuntywila eMorocco
Eyona ndandiyithanda kakhulu ukuntywila yayinguDakhla ngaphandle kwamathandabuzo, kumazantsi eMorocco, iparadesi, entle.
Ungandinika ulwazi malunga nale ndawo ... ngaba ukuntywila kulungile apho? Ndifuna ukuya ngoMeyi 2015 kwaye andifumani datha ininzi ... enkosi kakhulu
Marien garcia umqeqeshi sitsho
ungandixelela ngamaziko ama-mailo diving eDajla? Andifumani nto kwi-intanethi
Phendula u-marien garcia tutor